Ukuphela Kwefuthe LeKrismesi
“Kulula ukuzibona sele usisinxada-nxada ngeli xesha leholide. Izithethe ezenziwa ngexesha leKrismesi zibekelwa ecaleni, yaye nexesha elichithwa ziintsapho nabahlobo kunye liyancitshiswa ngenxa yokuxakeka. Asisalufumani uvuyo ebesidla ngokuba nalo ngexa yokuxinezeleka ngeli xesha.”—OBESAKUBA YIRHULUNELI YASEOKLAHOMA [EMERIKA] UBRAD HENRY, DISEMBA 23, 2008.
NJENGOKO iKrismesi isondela, iingoma, iimuvi neenkqubo ezikumabonwakude zikhuthaza abantu ukuba baqalise ukuba semoyeni wokuchwayita ngeli xesha—umfutho weKrismesi. Ucinga ukuba yeyiphi eyona nto ifanele ibe phambili kweli xesha lonyaka? Ngaba ifanele ibe
Kukukhunjulwa kukaYesu Kristu?
Luvuyo olubangelwa kukuphana izipho?
Kukuchitha ixesha kunye nentsapho?
Kanye njengoko iRhuluneli yaseOklahoma ecatshulwe ngaphambilana isitsho, abantu abaninzi ababhiyozela iKrismesi bakufumanisa kunzima ukuzenza ezi zinto zidweliswe ngasentla ngeli xesha lonyaka. Ixesha leKrismesi libonakala ilixesha lokuxakeka nokuchithwa kwemali yaye lijikelezisa ingqondo. Ngaba ukuhlakulela umfutho weKrismesi—okanye oko bekumele ukuba kuyenzeka ngeli xesha—kuyinto engenakwenzeka?
IBhayibhile iyakukhuthaza ukukhunjulwa kukaYesu Kristu, ukupha, ukunceda abasweleyo nokuchitha ixesha neentsapho zethu. Kwakhona iyasifundisa nendlela yokuba noxolo. Ngoko ke, endaweni yokuba sithethe ngezizathu zokuba abanye abantu bengayibhiyozeli iKrismesi, * kolu ngcelele lwamanqaku siza kuphendula le mibuzo ilandelayo:
Sisiphi isizathu abanye abavakalelwa kukuba sesokubhiyozela iKrismesi?
Kutheni bengakwazi ukuzenza izinto abazinqwenelayo ngexesha leKrismesi?
Yiyiphi imigaqo YeBhayibhile eye yanceda izigidi zabantu zafumana eyona nto ibhetele kunokubhiyozela iKrismesi?
^ isiqe. 10 Ukuze ufumane izizathu ezisekelwe eZibhalweni, zokuba abanye begqiba kwelokuba bangayibhiyozeli iKrismesi, funda inqaku elithi “Imibuzo Yabafundi—Kutheni Abanye Abantu Bengayibhiyozeli IKrismesi?”